Vaovao - Orinasa Jiafeng: ny firafitry ny RPET dia ho fironana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fitaovana amin'ny ho avy.
Orinasa Jiafeng: ny firafitry ny RPET dia ho fironana amin'ny fampandrosoana maharitra ny fitaovana amin'ny ho avy.
Mazava ho azy fa maika ny fiarovana ny tontolo iainana. Indostria maro kokoa no mahatsapa ny maha-zava-dehibe ny fivezivezena amin'ny tontolo iainana ary miditra amin'ny RPET ary manome anjara birikiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana eto an-tany. Ny lamba REPETY (Recycled PET Fabric) dia fantatra ihany koa amin'ny lamba maitso tavoahangy coke, dia vita amin'ny tavoahangy plastika vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny karazana fiarovana vaovao tontolo iainana maitso, ny loharano karbôna ambany, dia namorona hevitra vaovao eo amin'ny sehatry ny fanavaozana.
Raha jerena ny fivoarana maharitra, ankehitriny dia maro ny fitaovana ara-tontolo iainana no ampiasaina amin'ny faritra maro eto: ny landihazo sy rongony voajanahary sy rongony dia mahazatra na aiza na aiza, efa eo an-dàlana ny fitaovan'ny RPET, ary ho vita ny EVA na TPU voaverina. ny fironana vaovao. Ny fitaovana fibre zavamaniry vaovao toy ny lamba mananasy sy ny akondro dia novolavolaina sy ampiasaina.
Jiafeng dia nanolo-tena hikiry amin'ny fanahin'ny "marin-toetra, ny fahatokisana, ny fiaraha-miasa ary ny tombontsoa samy hafa", na dia tsy manimba ny tontolo iainana aza.
（Tyvek loko atla）
Jiafeng dia manitrikitrika hatrany fa ny fampiasana ireo vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana no fironana mahasoa ho an'izao tontolo izao. Ity kitapo RPET ity dia tsy mahafeno ny fepetra momba ny tontolo iainana sy avo lenta ihany, fa mety ho an'ny besinimaro, azo ampiharina ary lamaody.
Jiafeng koa dia manana karazana harona hafa miaraka amin'ny fitaovana ara-tontolo iainana samihafa. Toy ny fibre zavamaniry, landihazo azo alefa, mololo taratasy, taratasy Tyvek, taratasy kraft, TPU biodegradable sns sns. Ireo fitaovana rehetra dia afaka manova kitapo majika sy tsy manam-paharoa.
1, paosy rongony mananasy
2, kitapo landihazo azo haverina
3 straw Kitapo mololo
4 bag Kitapo taratasy Tyvek
Kitapo taratasy 5 Kraft
6 、 Mamaha indray ny EVA
7 bags Kitapo RPET hafa
Raha ampitahaina amin'ny landihazo polyester PET, ny RPET dia tsy manasongadina ny fomban'ny zavamaniry PET fa ny tombony azo avy amin'ny lamba landihazo.